चाैथाे विबाह | samakalinsahitya.com
&apos;एउटै व्यक्तिसँग तीनपटक विवाह! दोस्रोपटक फेरि सम्बन्ध विच्छेद! यो कस्तो आग्रह हो? कस्तो नियति? वैवाहिक सम्बन्धको पनि के अर्थ रह्यो? विवाह, सम्बन्ध र विच्छेद– खरिपाटीमा लेख्दै मेट्दै गरेजस्तो!&apos; यस्तै कुरा मडारिएपछि सावित्रीको मनले यसपटकको सम्बध विच्छेद स्वीकार्न सकेन। लोग्नेले सोचेर आजै जवाफ दिनु भनेको छ। ऊ रनभुल्लमा परी।
औंसीको रात। धेरै पर देखिएको &apos;लन्डन ब्रिज&apos; र &apos;लन्डन आई&apos;मा बलेका चहकिला बत्ती र सडकमा हुइँकिएका गाडीले सहर जागै रहेको संकेत दिइरहेको थियो। सहरभरि बलेका बत्तीलाई हेर्दैगर्दा पूर्णिमाको दिनभन्दा औंसीकै रात राम्रा देखी सावित्रीले।
&apos;पैसा जति भए पनि पुग्दैन। हामीलाई नपुग्दो के छ र? मेरो पार्टटाइम भए पनि दुवै जनाको जागिर छ। अपार्टमेन्ट छ। पुरानै भए पनि चलिरहेको गाडी र काठमाडौंमा सानो घर पनि छ। आफू–आफूलाई अलग गर्ने यस्तो काम नगरौं,&apos; सावित्रीले असहमति जनाई।
&apos;हामी बसेको बिल्डिङमा बस्ने पाकिस्तानी रदिफ, बंगाली चटर्जी र मसँगै काम गर्ने नाइजेरियन केभिनले पनि यसै गरेको छ,&apos; सावित्रीलाई मनाउन अमितले प्रमाण देखायो।
&apos;आमाको दूध चुसेर भएन बाउको घुँडा चुस्ने काम! भगवान्ले जति दिएका छन् त्यति खाम,&apos; सावित्रीले फेरि अडान लिई।
&apos;हाम्रो डिभोर्स कागजमा मात्रै हो। बस्न त सँगै बस्ने हो नि। कानुनी रूपमा अलग देखिएपछि तिमी &apos;सिंगल मम्&apos; हुनेछौ। बच्चा साना भएकाले तिमीले काम गर्नु पर्दैन। बच्चाको लालनपालन र घरभाडा भनेर एकमुष्ट सरकारी रकम महिनैपिच्छे पाउनेछौ। तिमीले र मैले कमाए बराबर रकम एक्लै तिम्रो नाममा आउँछ। मैले कमाएको पैसा अलग्गै बचत। अनि त आराम नै आराम,&apos; अमितले फाइदाको कुरा बतायो।
&apos;तीनपटक विवाह भयो हाम्रो र एकपटक डिभोर्स भइसक्यो। हुन त यो सबै सहमतिमै राम्रोको लागि भएको हो। अब दोस्रो डिभोर्स सरकारका आँखामा छारो हालेर अलिकति पैसा जोगाउनलाई हैन त? वैवाहिक सम्बन्ध भनेको आत्मालाई मनाएपछिको कुरा हो। यसरी पुनः विवाह, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता कागजी कुराको नकारात्मक प्रभाव मनमा पर्छ। भोलि साँच्चै कागजमा भत्काइएको सम्बन्ध मनले अस्वीकार गर्दै गयो भने?&apos; सावित्रीले आशंका प्रकट गरी।
&apos;त्यत्रो समाजलाई चुनौती दिएर गरेको विवाह र हाम्रो प्रेम त्यति कमजोर छैन,&apos; अमितले प्रेमको गाँठो झन् धेरै कस्दै भन्यो।
&apos;हुन्छ भन त। यो हाम्रै फाइदाको लागि त हो नि,&apos; अमितले दबाब दियो।
&apos;ठिकै छ नि त, तर पछि आउने दुष्परिणामको जिम्मेवार तपाईं। कानुनको लप्पनछप्पन म जान्दिनँ। सबै तपाईंको जिम्मा,&apos; सावित्रीले सचेत गराई।
&apos;त्यो सब म मिलाइहाल्छु नि,&apos; अमितले विश्वास दिलायो।
बच्चा हुर्काउनु र पढाउनु पर्ने &apos;सिंगल मम्&apos; भएको नाताले बेलायतको कानुनअनुसार सावित्रीको बैंक खातामा सरकारी सुविधाको पहिलो किस्ता आयो। सो रकम देख्दा छक्क परी ऊ। लोग्ने–स्वास्नीले काम गरेर कमाए बराबरकै रकम थियो। अब भने सावित्रीलाई उसले गरेको निर्णय गलत लागेन। धेरै खुसी भई।
&apos;कस्तो लाग्यो त हाम्रो चलाखी?&apos; कामबाट फर्केर आएपछि अमितले सोध्यो।
&apos;गज्जब राम्रो। म त त्यसै डराएकी रहेछु। कस्ती सोझी हगि म पनि,&apos; सावित्रीले अज्ञानता प्रकट गरी।
&apos;अब अर्को गेम आएको छ। पैसा कमाउने,&apos; अमितले भन्यो।
&apos;कस्तो?&apos; मेहनत नगरी आउने पैसा देखेकीले ऊ लालची हुँदै सोधी।
&apos;कानुनी रूपमा तिमी र म अब अविवाहित। मसँग काम गर्ने पाकिस्तानीको एक जना महिला आफन्त छे रे। त्यससँग मैले कागजी विवाह गरिदिएबापत पन्ध्रहजार पाउन्ड दिने रे,&apos; अमितले सुनायो।
&apos;अरूसँग विवाह गर्ने कामचाहिँ नगर्नू। लोग्ने मान्छेको मन थाहा हुँदैन। कागजमा नाम जोडिएपछि मन पनि जोडिन बेर लाग्दैन। मन जोडिएपछि अरू थोक पनि जोडिन्छ,&apos; सावित्रीको आशंका प्रकट गरी।
&apos;मेरो मनको ढोका त्यति कमजोर छैन। फेरि त्यसमा तिमीले लगाएको भोटे ताल्चाको चाबी तिमीसँगै छ नि। त्यहाँ अरूलाई प्रवेश निषेध छ,&apos; अमितले मनको ढोका सुरक्षित रहेको प्रमाण दियो।
&apos;खै के भन्नू? त्यति धेरै पैसा आउने रहेछ। ...ल ठिकै छ नि त। तर बेइमानीचाहिँ नगर्नू नि। त्यस आइमाईलाई भेट्दै नभेट्नू,&apos; पैसाले पगाल्यो सावित्रीलाई।
&apos;लोग्ने वास्तवमा बच्चा जन्माउनमात्र चाहिँदा रहेछन्। अरू बेला आवश्यकता परे लोग्ने मानिस भेटिहालिन्छ,&apos; युरोपियन हावाको प्रभावले यस्ता विचार उत्पन्न भएर सावित्रीको दिमागमा पट्टा खेल्न थालिसकेको थियो।
&apos;यी स्वास्नी मानिसहरू अलिकति धनसम्पत्ति र बच्चा भएपछि आफूलाई पूर्ण नारी ठान्दछन्। लोग्नेको आवश्यकता महसुस गर्दैनन् र वास्ता गर्न छाड्छन्,&apos; विस्तारै सावित्रीप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गयो उसको मनमा।
घरमा पैसाको कारणले शान्ति हरायो। घरमा अशान्ति र मनमुटाव बढ्न थालेपछि घरमा बिताउनुपर्ने समय बाहिर साथीभाइसँग र &apos;पब&apos;मा जान थाल्यो। बेलाबेलामा घर ढिला आउन थाल्यो। किन ढिला आएको भनेर सोध्दा झर्कोफर्को गर्ने र अनेक बहाना बनाएर उम्कने प्रयास गर्थ्याे। नारी मन त हो– ऊ घर ढिला आउनाको कारण त्यही पाकिस्तानी महिलासँग उठबस ठानी। अमितले सौता ल्याउन आँटेको ठहर गरी।
एउटा धूर्त तथा चतुर नेपालीले सावित्रीसँग सम्पर्क बढाउन सफल भयो। बस् त्यहाँबाट खेल सुरु भयो। र, सुरु भयो नयाँ कहानी।
त्यो चतुरले पहिले त सावित्रीको &apos;ब्रेन वाश&apos; गर्यो। बेलायतमा प्राप्त नारी अधिकार, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुरा पढाएर सावित्रीलाई मानसिक रूपमा सशक्त बनायो। त्यसपछि बिस्तारै मायाजाल बिछ्यायो। उसको जालमा परी सावित्री। आखिर ऊ जवान थिई। जवान हुनुको अर्थमात्र सम्झाएन त्यसले सावित्रीको जवानी नै पुनर्ताजगी गराइदियो।
साँझ बितेर मध्यरात भयो। चतुरे आएन। उसको मनमा अनेक शंका–उपशंका पलायो। रातभर राम्ररी सुत्न सकिन।
बिहानको उज्यालोले झ्यालबाट चिहायो। त्यो उज्यालो त्यति शुभजस्तो लागेन। बिहानीपखको निद्रामा नराम्रो सपना देखेकी थिई। मनमा नराम्रा कुरा खेल्दै थिए। बिहान करिब नौ बजेतिर कसैले डोरबेल थिच्यो। इन्टरकम फोनमा को हो भनेर माथिबाटै सोधी।
&apos;मिस्टर अमितको नाममा दर्ता भएको गाडी विना लाइसेन्सका मिस्टर चतुरमानले चलाएर दुर्घटना गरेको छ। उसैले दिएको ठेगानाअनुसार हामी यहाँ आएका हौं। कृपया गाडीवाला अमितलाई प्रहरीमा सम्पर्क गर्न खबर गर्नुहोला। प्रहरीले एउटा टेलिफोन नम्बर लेखेको कागज थमाउँदै भन्यो।
&apos;को हो?&apos; सावित्रीले माथिबाटै इन्टरकम फोनमा सोधी।
&apos;पोस्टम्यान। रजिर्स्टड लेट्टर।&apos; घन्टी थिच्नेले जनाउ दियो।
&apos;तपाईंले पुनर्विवाह गर्नुभएकोमा बधाई छ। तपाईंको सफल दाम्पत्य जीवनको लागि शुभकामना छ। तपाईं अब &apos;सिंगल मम्&apos; नरहेकोले राज्यबाट प्राप्त हुने &apos;सिंगल मम्&apos;लाई दिइने सुविधा अब उप्रान्त नपाइने जानकारी गराइन्छ।&apos;
- See more at: http://nagariknews.com/nagarik-sanibar/story/31153.html#sthash.kpxnj6NH.dpuf